Qoraalada - Muuqaalka Cradle
Komi Can't Communicate waa Manga aad loo jecel yahay oo dhawaan laga sameeyay anime kaas oo lagu sii daayay Netflix. Komi Can't Communicate wuxuu leeyahay 5 qeybood ilaa haatan waxaana lagu wadaa in la sii daayo 7 kale si uu u dhameystiro 12-ka qeybood ee xilli ciyaareedka kowaad. Waxaan ku tusi doonaa sida aad u akhrin karto […]
Boostada waxaa u heellan dabeecadda Mary Saotome oo ka socota Anime Kakegurui. Boostada waa la cusboonaysiin doonaa marka macluumaad badan iyo macluumaad lagu daro si loo taageero qaybteeda. Fadlan sug ilaa waxa cusub lagu darayo
Kakegurui waa riwaayad khayaali ah oo riwaayad ah oo soo baxday 2017. Anime si fiican ayaa loo soo dhaweeyay markii ay soo baxday iyo xilli 2 ayaa la sii daayay 2019. Xilligii labaad ayaa helay dareen badan oo dheeraad ah maadaama ay sii ballaarisay jilayaasha qaarkood ee taxanaha. Kuwaas waxaa ka mid ahaa Yumeko Jabami, Mary Saotome, Ryota Suzui. In […]
Boostada waxaa loogu talagalay jilaha Yumeko Jabami ee Anime Kakegurui. Wax badan ayaa lagu dari doonaa qoraalkan marka la cusboonaysiiyo. Fadlan dib u eeg mar dhow
Waxaa jira lamaanayaal badan oo ku habboon Anime, qaarkoodna runtii aad ayey uga soocan yihiin inta badan. Tusaalaha dhabta ah ee lamaanaha ku habboon Anime waxay noqon karaan Hanabi iyo Mugi oo ka socda Kuzu No Honkai. The Dramatic Romance Anime kaas oo u soo baxay sidii Taxanaha Scums Wish TV ee 2017 uu kala qaybsamay […]
Komi Shouko waa jilaha ugu muhiimsan ee Anime Komi ee caanka ah ma wada xiriiri karo. Laakiin waxaa jira wax la yaab leh oo iyada ku saabsan. Ma hadli karto. Xataa hal eray ma odhan karto. Haddaba waa ayo Komi Shouko? Iyo doorka ay ka ciyaareyso Anime-ka. Maqaalkan waxa aynu ku dul qaadan doonaa hab-dhaqankeeda iyo doorkii ay ku lahayd […]
Dhammaanteen waan jecelnahay Cosplay. Waa waxa u oggolaanaya taageerayaasha inay si fiican ugu xidhmaan bandhigga ama ciyaarta ay jecel yihiin. Waxaa jira Cosplayers badan oo kala duwan oo ku jira qoraalladan waxay dhex marayeen Fiidiyowyada Sexy Cosplay ee ugu Wanaagsan. Waxaa jiri doona xiriirin ku laabanaya goobtoodii asalka ahayd. Annagu kuma xidhna mid ka mid ah kuwan […]
Classroom Of The Elite Anime waxa uu ahaa Anime caan ah oo asal ahaan soo baxay 12th Luulyo 2017. Anime-ku waxa uu ku salaysan yahay mangaga isla magaca kaas oo soo baxay horraantii 2016, ee Warshada Warshada Majaajilada Billaha ah ee Majaajilada. Anime-ka si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay waxayna mar hore ka hadlayeen fasalka […]